Nonstop Khabar, Author at A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news - Page2of 383
नेपाल विश्वकप छनोटमा थाइल्याण्डसँग पराजित
१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०३:४७ February 22, 2019 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, ९ फागुन । आइसीसी महिला विश्वकप टि ट्वन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत एशिया छनोटको दोस्रो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग पराजित भएको छ । थाइल्याण्डको बैंककस्थित एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग ५७ रनले पराजित भएको हो । एक सय २५ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपाल निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै ६७ रनमा […]
१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०३:४१ February 22, 2019 Nonstop Khabar
एजेन्सी । अमेरिका–चीनबीच देखिँदै आएको व्यापार विवादलाई अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप दुई देशका अधिकारीहरूले आठ दिनपछि बिहीबारदेखि वार्ता पुनः शुरू गरेका छन् । विश्वका दुई अर्थतन्त्रबीच व्यापार बिषयमा देखिएको गहिरो तनावलाई समाधान गर्ने प्रयासमा भएका वार्ता सकारात्मक बन्दै गएपछि उनीहरू पुन वार्ताको टेबलमा आएका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच अर्जेन्टिनाको […]
एजेन्सी । फ्रान्समा चिसोमा संक्रमण हुने रोग, फ्लुको महामारीका कारण यस बर्षको शीतकालीन समयमा कम्तिमा दुई हजार ८०० जनाको मृत्यु भएको यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएका छन् । फ्रान्सभर अक्टोबरदेखि फेब्रुअरी ३ गतेसम्म फ्लुका कारण मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश अर्थात् ७८ प्रतिशत नागरिकमा ७५ बर्षमाथिका वृद्धहरू भएको फ्लु र यसबाट परेका समस्याबारे तयार साप्ताहिक प्रतिवेदनमा बिहीबार उल्लेख […]
१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०३:३४ February 22, 2019 Nonstop Khabar
ढाका । बङ्गलादेशमा भएका भीषण आगलागीका घटनाहरूको शृङ्खलाअन्तर्गत राजधानी ढाकामा बुधबार राति पनि अर्को आगलागीको घटना भएको छ । सो आगलागीमा परी कम्तीमा पनि ७० जनाको ज्यान गएको छ । बङ्गलादेशमा आगलागी, भवनहरू भत्किने जस्ता घटनाहरू बेलाबेलामा भइरहेको पाइन्छ । यसअघि सन् २०१३ को अप्रिलमा ढाकाको राना प्लाजाको नौतले भवनमा भएको आगलगीमा परी एक हजार […]
१४ वटा भाषा जान्ने चरोको रोचक कथा
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार १०:५९ February 20, 2019 Nonstop Khabar
एक जना व्यापारी कामको दौरानमा अफ्रिका जान्छन् । त्यहाँ उनले अखबारबाट थाहा पाउछन् कि चौध वटा भाषा बोल्न सक्ने चरा किन्न पाइन्छ । तर मूल्य भने एक लाख डलर । उनी धनी थिए यसर्थ उनले त्यस अजीव चरालाई अफ्रिकाको कोशेली स्वरूप किनेर पार्सल गरी घर पठाइदिए । काम सकिएर घर पुग्नासाथ उनले श्रीमतीलाई सोध्छन्, ‘मैले […]
के तपाई तनावमा हुनुहुन्छ ? तनावबाट मुक्ति पाउने अति प्रभावकारी यी उपाय पढ्नुहोस
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:४८ February 20, 2019 Nonstop Khabar
१- यस्तो मान्छेहरुसित कुरा गर्नुस जोसित बोल्दा मन खुसी, प्रफुल्लित र पोजिटिभ हुन्छ । २- खुसी हुनेबारे पुस्तक पढ्नुस, मोटिभेसनल गीत सुन्नुस । ३- आफ्नो टेन्सनको कारण कोही नजिकको साथीलाई शेयर गरेर सुझाब लिनुस । ४- यो बुझ्नुस कि तपाईं जति Tension लिनुहुन्छ तपाइको Life मा त्यति नै कठिनाइ आउँछ । ५- नदी पोखरी या […]
Bulacan Press Club signs MoU with international peace NGO for ‘Peace Journalism’
७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १७:३९ February 19, 2019 Nonstop Khabar
Aimed at enhancing cooperation in the field of peace journalism, Bulacan Press Club andaSouth Korea based international Peace NGO, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) signedaMemorandum of Understanding(MoU) on February 15th. The MoU was signed by Frederick Silverio, President of Bulacan Press Club,and Mr. Man Hee Lee, Chairman of […]
७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १७:२६ February 22, 2019 Nonstop Khabar
परिदृश्य एक बानेश्वरस्थित एउटा बैङ्केटमा आयोजित विवाह भोजमा सहभागी हुन एक दम्पती आफ्नो कक्षा ४ मा अध्ययन गर्ने छोरासहित पुग्दछन् । पृष्ठभूमिमा बजिरहेको छ लैजाउ न मलाई घुमाउन ठमेल बजार बोलको कथित सुपरहिट गीत । पुग्नासाथ पार्टीको रामरमाइलोमा आफूलाई घुलमिल गराउँछन् । बालकको पिता आफ्ना पुरुष सहकर्मीहरु मदिरामस्तीमा डुब्छन । माता चाहिँ आफ्ना महिला संगीहरु […]
पहाडी जिल्लाका सडक सुधार नहुँदा यात्रु उच्च जोखिममा
७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १०:३८ February 19, 2019 Nonstop Khabar
जाजरकोट, ५ फागुन । भेरी नदीमा बस खसेर बिहीबार साँझ चार जनाको मृत्यु भयो । भेरी नगरपालिका–१ रिम्ना नजिकको सडकबाट नदीमा बस खसेर भएको दुर्घटनाको मुख्य काराण साँघुरो सडकको मोड, सडकमा जोखिमपूर्ण तरिकाले बनेको चटानको खोच र त्यसमाथि गाडीको गति नै रहेको पाइएको छ । गाडी चालक वा त्यसमा चढ्ने यात्रुहरु सबै डराउने सडक क्षेत्र […]